Imvelo Kastria Kalavryta - I-Airbnb
Imvelo Kastria Kalavryta
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Joanna
U-Joanna Ungumbungazi ovelele
Indlu itholakala eKastria, idolobhana eliseduze neKalavryta. Indlu inekamelo elilodwa lokulala (umbhede okabili), igumbi lokugezela elilodwa kanye negumbi lokuphumula elilodwa, elinekhishi elikhulu elinefriji, uhhavini, imishini yekhofi, umshini wokuthosa nazo zonke izinto zokupheka. Eduze kwekhishi kunombhede kasofa namatafula amabili, elincane nelikhulu. Indlu inamathelevishini amabili, iWiFi nama-heater.
I-Kastria iyidolobhana elinezintaba. Inesikwele esihle, isitolo sekhofi esivamile phakathi neKastria, inkundla yebasketball kanye namasonto amaningi ongawathola. Isonto lika-Analipsi lisentabeni, lihle futhi linombono oyingqayizivele. Umbono ongcono kakhulu eKastria Umgede Wechibi odume kakhulu eYurophu. Umuntu othile ubekwazi ukubona ama-stalactites futhi eduze kwesitolo sekhofi. I-Kastria iyindawo lapho umuntu angagibela khona izintaba, ukushushuluza eqhweni, ayokwenza ipikiniki, ayozingela .
Eduze neKastria yindawo yokushushuluza e-Kalavryta, itholakala kumakhilomitha ayi-17 kude. Le ndawo yokungcebeleka nayo idumile. Kalavryta itholakala 17 km kude Kastria. EKalavryta kunamathaveni amaningi, izitolo zekhofi nezitolo zezivakashi. Eduze kweKastria kunesigodi sasePlaniteros (5 km kude). Yinhle kakhulu, ineziphethu, izihlahla ze-platania kanye nezindawo zokucima ukoma lapho umuntu angaya kodoba futhi abuke izu yezilwane encane. I-Kleitoria iyidolobhana elilandelayo kuPlaniteros (amakhilomitha ayi-7 ukusuka eKastria). E-Kleitoria kunezindawo eziningi zokucima ukoma nezitolo zekhofi, izimakethe ezincane, isitolo samakhekhe namabhange afana nePiraeus, Ethniki ..
Nganoma yini oyidingayo, ungangabazi ukusithinta.
UJoanna Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: 00000893375
Hlola ezinye izinketho ezise- Kastria namaphethelo